HORDHAC : Juventus VS Ajax? Tollow Juventus mala kulmi doontaa lama filaankii ku dhacay Kooxda Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 16 Abriil 2019 Kooxda Juventus ayaa waxa ay buqcadeeda ku soo dhaweeneysaa Kooxda Ajax kulanka lugta labaad ee wareega sideed dhamaad tartanka Champions League.
Labadan Koox ayaa bar-baro ku soo hishiiyey kulankii hore oo ka dhacay ciida Kooxda Ajax. Hadaba kulankan ayaa noqon doono mid kala bax ah iyada oo la ogaa in Ajax si lama filaan ah ay tartankan ugu reebtay Kooxda Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa ku soo laaban doona line-upka ka dib markii la siiyay isbuuc nasiino ah laakiin Juventus ayaan heysan weerar yahankooda Mario Mandzukic oo laf dhabar u ahaa kooxda Cajuusta.
Paulo Dybala, Douglas Costa ama Moise Kean ayaa ah doorashooyinka bedeli kara Mandzukic halka Giorgio Chiellini uusan wali ka soo kabsan dhaawaciisa, laakiin Emre Can ayaa waxaa uu ku jira magacyada uu xushay Max Allegri.
Daniele Rugani ayaa shaki ku jira ka hor kulanka Talaadada, lakiin waxa uu ku jiraa kooxda waxaana la filayaa inuu halkaan kusoo bilowdo.
Federico Bernardeschi ayaa seegi kara kulanka lugt hore ee wareega afar dhamaadka hadii uu caawa qaatao calaamad jaale ah.
Ajax ayaa dib u soo dhaweeneysa Noussair Mazraoui oo ganaax ku maqnaa, lakiin haatan waxaa kulanka ganaax ku seegaya daafaca dambeedka bidix Nicolás Tagliafico. Daley Sinkgraven ayaa ah xidiga badeli kara xidigaas misane heli karaa bilawga koobaad ee ciyaarta. .
Frenkie de Jong ayaa shaki weyn ku jira kaddib markii uu dhaawac kasoo gaaray qeybtii hore ee kulankii Ajax ay 6-2 kaga badisay kooxda Excelsior Sabtidii.
Klaas-Jan Huntelaar ayaa ku lug lahaa afar gool oo horyaalka ah bilowgii Isbuuca, laakiin lama filayo inuu kulankan kusoo bilowdo, dhica kale
Maqnaanshaha De Jong ayaa laga yaabaa inuu Ajax ku qasbo iney isbedel ku sameeyaan safkooda waxaana fursad heli kara Kasper Dolberg in lagu soo bilaabo.
Matthijs de Leicester iyo Daley Blind ayaa hal jaale u jira in ay segaan kukanka lugta koowaad ee wareega xiga hadii ay ugudbaan.
Kulanka : Juventus VS Ajax ( Champions League)
Goobta :Allianz Stadium
Goorta: 10:00 Oo Habeenimo
Garsoorka : Clement Turpin (France)
Xaqiiqooyinka laga xusay karo ka hor kulanka :
Juventus ayaa guul daro la’aan ah 10-kii kulan ee la soo dhaafay oo ay la ciyaartay Kooxda Ajax,waana rikoorka ugu dheer ee koox ay ka heysato koox kale tartamada Yurub sidoo kale Kooxda Bayern Munich ayaa rikoor noocan oo kale ka heysata Kooxxa Benfica.
Kaddib 8-kulan oo ay horey u booqatay kooxaha reer Italy kooxda Ajax ayaa la kulantay 7-qasaaro iyo 1-bareejo blase hada Ajax ayaa guul daro la’an ah afartii kulan ee ugu dambeeyey ( 2-guul iyo 2-bareejo).
Kooxda Juventus ayaa raadineysa in ay gaarto wareega afar dhamaadka ee Champions League markoodii sedexaad shantii sano ee la soo dhaafay gudohood horey waxa ay u tiigsadeen sanadihii 2014-15 iyo 2016-17.
Ajax ayaa dhankeeda iyaduna ee ganeysa in ay gaarto wareega semi-finalka ee tartanka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 1996-97, waxa ayna noqon doonaan kooxdii ugu horeysay ee reer Holand ah oo soo xaadirta tan iyio PSV in 2004-05.
Juventus weerarkooda Cristiano Ronaldo aya ka dhalinayey gool shantii kulan ee ugu dambeeyey ee uu ka hor yimid Kooxda Ajax, wallow guud ahaan uu ka dhaliyey 8-gool. Xidiga reer Portugal ayaa 51% goolasha uu ka dhaliyey tartanka waxa ay yimaadeen kulamad bug baxa, 64-gool ayuu ku dhaliyey isaga oo ciyaaraya kulamo kala bax ah iyada oo la og yahay in 125-gool uu tartanka oo dhan ka dhaliyey.
Eeg safafka macquulka ah ee labada dhinac :